MDC Inoshora Mashoko aVaMugabe kuMusangano weU-N
Gunyana 27, 2007
NeChitatu mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakapihwa mukana wekutaura pamusangano weUnited Nations General Assembly.
Vachitaura pamusangano uyu, VaMugabe vakati Zimbabwe yakatarisana nematambudziko ari kukonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze, kana kuti global warming. VaMugabe vakati Zimbabwe yava nemakore anodarika gumi ichisangana nedambudziko iri.
Vakatiwo nyika dzose pasi rose dzinofanirwa kutora matanho ekugadzirisa nyaya yeglobal warming.
VaMugabe vakatorawo mukana uyu kutaura pfungwa dzavo pamamiriro akaita nyaya yedare reSecurity Council muUnited Nations. Vakatorawo mukana uyu kushoropodza mutungamiri weAmerica, VaGeorge Bush, pamwe nemutungamiri weBritain, VaGordon Brown, vachiti vaviri ava vari kuda kuti vabvise hurumende yavo pachigaro.
MDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti hapana zvitsva pamashoko akataurwa naVaMugabe.
Munyori anoona nezve kudyidzana nedzimwe nyika muMDC, Professor Eliphas Mukonoweshuro vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti yava garoziva pamashoko aVaMugabe aya, ayo vati afanana nemari yakare isisina zvainotenga.
Zvichakadaro,munyori mukuru weUnited Nations, VaBan ki-Moon, vati vari kuda kusangana nevamiriri venyika dzemuSADC, kuti vaone kuti U-N ingabatsira sei kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe.
Mutauriri waVaMugabe, VaGeorge Charamba, vaudza bepanhau reThe Herald kuti VaBan-Ki-Moon vachatanga nekusangana naVaMbeki, avo vakasarudzwa neSADC kuti vave mutongi gava panyaya yeZimbabwe.
VaMugabe vakasanganawo naVaMbeki neChitatu vakati vachavatumira tsamba yekuti vari kufara nezviri kubuda munhaurirano pakati peZanu-pf neMDC.
Vamwe vakuru mu U-N vaudza Studio 7 kuti VaBan-ki-Moon havana kutambira mashoko aVaMugabe ekuti muZimbabwe hamuna dambudziko rakanyanya, asi kuti Britain neshamwari dzayo ndiyo iri kuita kunge pane zvikuru zviri kunetsa.
Mutauriri we U-N, VaYves Sokorobi, vati VaBan-ki-Moon vakaudza VaMugabe kuti varatidze hutungamiri hune humhizha nekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzehupfumi uye zvematongerwo enyika.
VaOtto Saki igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Blessing Zulu weStudio7 abvunza VaSaki kuti vanoti kudii nezvava kuitwa naVaBan-ki-Moon.